htaccess: Faylka Marinka iyo Toosinta Regex | Martech Zone
Fududeynta qaabdhismeedkaaga URL waa hab fiican oo lagu hagaajin karo boggaaga sababo badan awgood. URL-yada dhaadheer way adagtahay in lala wadaago kuwa kale, waxaa laga jari karaa tifaftireyaasha qoraalka iyo tifaftireyaasha emaylka, qaababka isku dhafan ee faylasha URL waxay u diri karaan calaamado khaldan mashiinnada raadinta muhiimada waxyaabahaaga.
Haddii bartaadu lahayd laba URL:
Midkee ayaad u maleyneysaa inuu maqaalka siiyay muhiimad sare? Tusaalaha ugu horreeya wuxuu leeyahay kala-goyn u dhexeeya maqaalka iyo bogga hoyga ee 5 heer. Haddii aad ahaan lahayd mashiin raadin, ma u malayn lahayd inay tani ahayd nuxur muhiim ah?
Sababahan awgood, waxaan fududeyneynaa qaar badan oo ka mid ah macaamiishayada qaabdhismeedyadooda galka. Qaarkood ayaa laga yaabaa inay ku doodaan in dhowr nooc oo isdaba-joog ah oo leh ereyada muhiimka ah ay ka fiican yihiin, laakiin tan kama aanan arag tan macaamiisheenna. Kala sarraynta iyo tirada xiriiriyeyaasha ka socda bogga guriga ayaa horseeday qiimeynno aad uga wanaagsan waxyaabahayaga caanka ah.
Ka dib markii la hirgeliyo baloog, in kastoo, waa wax yar oo xanuun ah in la tirtiro dhammaan xiriiriyayaashan joogtada ah oo wali si habboon loogu wareejiyo taraafikada khadadka hadda jira ee halkaa ku jira qaab dhismeedka cusub ee URL. Iyadoo Flywheel (xiriiriye xiriiriye), waxaan uheysan karnaa kooxdooda inay maamusho meelaheena ama waxaan isticmaali karnaa qalabka dib u habeynta.
Marka hore, waan shaqaaleynaa Yoast ee WordPress SEO plugin si aan uga siibno suugaanta qaybta slug ka baxsan URLka
Marka xigta, waxaan cusbooneysiineynaa fikradaha 'permalinks' oo waxaan ka saarnaa /% qaybta% / oo waxaan kaliya ka tagnaa /% boostada% / berrinka (oo aan cusbooneysiinnaa keydka).
Ugu dambeyntii, waa inaan ku darnaa hadal si joogto ah si sax ah loogu wareejiyo galka:
Muujinta waxay leedahay qaybahaaga ikhtiyaariga ah ee ku taxan (folder1, folder2, folder3) waxayna ubaahantahay xoogaa qoraal kadib qeybta… habkan bogagaaga qeybta ma jabin doonaan laakiin qodobada madaxa banaan waxay sifiican ugu gudbin doonaan URL-ka cusub.
Ma hubo inaan kugula talin lahaa is-beddelkan adag ee shirkad kasta. Kuwa leh darajo aasaasi ah ma rabi karaan inay tan keenaan. Waqtiga dhow, waxay dhaawici kartaa darajadaada maadaama dib u habeyn aysan xambaarsaneyn dhammaan awooda bogga asalka ah. Laakiin waqti ka dib, haysashada waxyaabo badan oo ka sarreeya heerarkaaga caadiga ah ayaa kaa caawin kara. Waan ognahay in la caawiyey Martech Zone!
Tags: 301 dib u habeynregex categoryflywheel.htaccesshtaccess dib u celinka saar qaybtaqaybta xargahagalka galkawordpress permalink
Meheraddaadu ha ahaato mid xiiso leh?
10 Talaabo oo loogu talagalay Adeegga Macaamiisha Bulshadda ee dhalaalaya